वन्यजीव टूर ओडिशा | फ्लोरा र फ्युना अन्वेषण गर्नुहोस् - 993.702.7574
वन्यजीव भ्रमण ओडिशा स्यान्डपेबल्सका साथ - प्रकृति, फ्लोरा र ओडिशा को फ्युन संग एक सुन्दर अनुभव।
एक वास्तविक वन्यजीव भट्टराई खोज्दै हुनुहुन्छ? वन्यजीव भ्रमण ओडिशा तपाईंको अन्तिम गंतव्यको भ्रमण गर्न हो!
यद्यपि समुद्र तट र मन्दिरहरूले आफ्नो लोकप्रियताको लागि ब्याटन घर ल्याए तापनि वन्यजीव टूर ओडिशा अनुभव गर्न अद्भुत छ। राष्ट्रिय पार्कहरूको बाग, बाघको जङ्गल र वन्यजीव अभ्यारण्यहरू, राज्यले भ्रूण र वनस्पति प्रजातिहरूलाई भित्तामा पुर्याएको छ जुन तपाईंले संसारमा अरू फेला पार्न सक्नुहुन्न। यो मंगोलवे वनहरू र भित्तिकालिकाका गल्लील्याण्ड वा चन्द्रका जंगलीहरू हुनुहोस्, पूर्वी भारतीय राज्यको हरेक नुकीलो र क्रेनले धनी वन्यजीवनलाई गम्भीर बनाउँछ।
तपाईंको वन्यजीव टूर ओडिशामा , तपाईं जनावरहरू आफ्नो असीमित आवासको वरिपरि घुमाउन मौका पाउने मौका पाउँदछन्, उनीहरूको आवाज सुन्नुहोस् र उत्तेजना संग तपाईंको हृदयको घाउ बढाउनुहोस्। यहाँ, तपाईं आफ्नो प्राकृतिक आवास मा बाघ, हङकङ, मगरमञ्च, हिरण, जैकल, र धेरै अधिक शामिल प्राणीहरु को सैकड़ों विविध जीनस साक्षी देख सकते हो।
हाम्रो वन्यजीव टूर ओडिशा प्याकेज तपाईंको चासोको आधारमा छ र एक अवसर प्रदान गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ जुन वन्यजीवनको उत्तम अवस्था हो जसले राज्यलाई प्रस्ताव गरेको छ।
Satkosia - Bharkarkanika - Similipal
दिन 01: आगमन भुवनेश्वर
भुवनेश्वर एयरपोर्ट / रेलवे स्टेशनमा आगमन र होटलमा स्थानान्तरण। लखनजी मन्दिर, खुदागिरी उदयगिरि जैन गुफाहरु को दोपहर यात्रा। इमराम ह्याट डिनर र रातभर भुवनेश्वर मा शाम को निःशुल्क शाम।
डे जेएनमक्स: भुवनेश्वर - सतकोशिया
नाश्ता पछि सटुलसिया को माध्यम ले Angul मार्फत। Satkosia Gorge मा डुङ्गा क्रूज लिनुहोस् जहाँ तपाईं रेतको किनारमा मगगर र ग्यारियल भरमा आउन सक्नुहुन्छ। दोहोरो ट्रेकिङ प्रकृतिको ट्रेलमा। डिनर र रातोरात मा शनिकोसिया।
DAY 03: Satkosia - Bharkarkanika
नाश्ता भ्रमण पछि Bharkarkanika। हाम्रो रिजर्ट मा चेक - इन .बिलिजाजा दिहा आइल्याण्ड को एक स्वादिष्ट गृह शैली लंच क्रूज पछि वन्यजीव विभाग द्वारा अनुमोदित ग्रामीण इलाकों मा, रामराम साइट को मनोरम दृश्य को आनंद ले। शाम को लाइव आलाती दरशन मा भाग लेने को लागि जगन्नाथ मंदिर को दौरा। साँझमा नाश्ता र डिनरको साथ शिविरको आनन्द लिनुहोस्। राती रातीमा रेत पिब्बल्स जंगल रिसोर्ट्स।
दिन 04: Bharkarkanika
एक स्वादिष्ट गृह शैली नाश्ता पछि, बर्ड अभयारण्य को भ्रमण, प्राचीन राजा को टवर शिकार गर्न को लागी ट्रैकिंग, वन्यजीव विभाग द्वारा अनुमोदित ग्रामीण किनारों द्वारा क्रूज को लागि क्रूज को विभिन्न क्रूज को क्रूज। लंचको भ्रमण पछि संग्रहालय र परियोजना क्षेत्रमा। साँझमा नाश्ता र डिनरको साथमा क्याम्पस आगोको आनन्द लिनुहोस्। रातभरै बजे बालुवा पिबल्स जंगल रिसोर्ट्स।
दिन एक्सएनएक्स: भित्तिकन - सिमिलिपल
एक स्वादिष्ट गृह शैली नाश्ता सिमिलिपल टाइगर रिजर्व को भ्रमण पछि। होटलमा चेक-इन गर्नुहोस्। लंच प्रकृति प्रकृति र हर्बल नर्सरीमा प्रकृति अध्ययन पछि, क्रोकोडाइल प्रजनन खेतीमा जानुहोस्। रात्रि र रातभर सिमलिलिपलमा।
दिन 06: सिमुलिपल
नाश्ता भ्रमण पछि बाराशनी र जोरंदा जलविद्युत र जंगल सफारी। त्यसपछि चहाला क्षेत्रको भ्रमण गर्नुहोस्। रात्रि र रातभर सिमलिलिपलमा।
दिन एक्सएनएक्स: सिमिलिपल - प्रस्थान
नाउको यात्रा पछि अघिल्लो यात्राको लागि